Dad isku qoys ah oo caawa ku dhintay Madaafiic ku soo dhacday Jen. Da'ud
Ku dhowaad 7 ruux ayaa ku dhimatay tiro kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray, kadib markii caawa fiidkii Xaafada Jen. Daa'uud ee Deegaanka Suuq Bacaad ay ku soo dhaceen Madaafiic Hoobiyeyaal. Madaafiicdan ayaa ahaa kuwo soo gudbay, xilli dagaalo ba'an ay ka soconayeen Wadada 30-ka ee Magaalada Muqdisho. Dadka dhintay waxaa ku jiray lix ruux...
Dagaalo saf ballaaran ah oo caawa ka qarxay qeybo ka mid ah Muqdisho
Dagaalo caawa fiidkii soo bilowday ayaa ilaa iyo hada ka soconaya Magaalada Muqdisho, kuwaasoo ah kuwo saf ballaaran ah oo ay Kooxaha Kacdoonka kula jiraan Ciidamada Ethiopia iyo kuwa Dowladda ee is garabsanaya. Wararka laga helayo Goobaha Dagaalada ayaa sheegaya in dagaalada dhowr meel ay ka socdaan, kuwaasoo hugunkooda caawa hareysay magaalada oo...
Ku dhawaaqista Doorooshooyinka Kenya oo ay hakiyeen Rabshadaha taagan
Iyadoo mudadii la filayay ee ahaa in lagu dhawaaqo doorashooyinka Dalka Kenya ay dib usii dhacayaan ayaa hadana waxaa xoogeysanaya Rabshadaha ka soconaya Magaalada Nairobi iyo Magaalooyinka kale ee Dalkaas. Qeyla dhaan xoogan ayaa ka soo baxeysa Xisbiga Mucaaradka ODM ee uu hogaamiyo Musharaxa Raila Odinga, iyadoo la sheegay in Xisbiga Talada dalka...
Meydka ilaa 3 ruux oo ay toogteen Ciidamada Ethiopia oo laga helay ..
Meydka Ilaa 3 ruux ayaa maanta laga helay Xaafada Xamar Jadiid, kuwaasoo ay toogasho ku dileen Ciidamada Ethiopia ee ku sugan Isbartiibada. Xalay oo ay Ciidamadu gudaha usoo galeen Xaafadaas ayaa waxa ay ka qab qabteen dad dhowr ah, iyagoona toogasho u geystay saddex ruux. Dadka ay wateen ayaa waxaa ku jira qof ay dhaawaceen oo ay dhaawaciisa ku...
Ciidamo Ethiopian oo aad u hubeysan ayaa soo degay Deegaanka Kala Bayr,
Ciidamo Ethiopian oo ka yimid Dhinaca iyo Xuduuda Feer Feer ayaa maanta fariisin cusub ka sameystay Deegaanka Kala Bayr, xilli Ciidamadii ee ku sugnaa Guriceel ay isaga baxeen. Ciidamadan oo aad u hubeysan ayaa soo degay Isgoyska Kala Bayr ee Deegaanka Jawiil, waxaana la sheegay in halkaas ay bar koontarool ka sameysan doonaan. Maamulka Gobolka...